AMBOVOMBE-ANDROY : Jiolahy roa mpamaky trano voasambotra
Tsy mitandro hasasarana miaro ny vahoaka sy ny fananany ny mpitandro filaminana ao Ambovombe-Androy. 28 novembre 2019
Jiolahy miisa roa saika nanolana tovovavy iray tao an-tranony no tra-tehaka tao Berary Ambovombe-Androy, ny alin’ny alatsinainy 25 hifoha 26 novambra lasa teo. Tokony ho tamin’ny 01 ora maraina, nahazo antso fanairana avy amin’ny olona tsara sitra-po ny teo anivon’ny vondron-tobim-paritry ny zandarimariam-pirenena, Androy. Voalaza fa misy fanafihana ao amin’ny tokantrano iray ao amin’ny fokontany Berary, kaominina Ambovombe Androy. Vao nahare izany ny zandary dia nandefa avy hatrany ireo ekipa mpanao vonjy taitra izay efa vonona sy miandry raharaha ny alin’io.
Rehefa tonga tany an-toerana, nohodidinin’ny zandary ilay trano nahiahiana ary nidirana araka ny haiady voaomana. Tratra tao tsy afa-nandositra ny zatovolahy roa samy mitazona antsy avy, nikasa ny hamono sy hanolana ity tovovavy iray 20 taona, izay mbola tratra nofatoran’izy ireo tao an-tranony sady naboridan’izy ireo tanteraka. Nosamborin’ny zandary ireto farany ary notazomina ao amin’ny sampana mpanao fikarohana eo anivon’ny vondron-tobim-paritra Androy, hanaovana ny famotorana ka hatolotra ny Fitsarana aorian’izany.